कवि मनु र उनका पहाड चढिरहने कविता | मझेरी डट कम
पाठकहरू भन्छन् - "नेपाली कवितामा क्लिष्टता एउटा पीडा भएर रहेको छ । नबुझिनुको समस्याले हामी ग्रस्त छौं ।"
बीसको दशकको प्रयोगवादी कविताको युगले क्लिष्टताको धेरै लामो आरोप खप्नुपरेको थियो । आज पनि क्लिष्टताको कुरा उठ्दा मोहन कोइराला, वैरागी काइँला र इश्वर बल्लभका नामहरू उदाहरणमा आउँछन् । त्यस कालका अरू पनि धेरै कविहरू क्लिष्टताको आरोपले सुशोभित छन् नै तर तीसको दशकमा प्रवेश गरेपछि कविताहरूले क्लिष्टताको मार्गबाट क्रमशः मुक्ति पाएको अनुभव गरेका हुन् पाठकले । यद्यपि समकालीन कविताको नाम पाएका तीसको दशकका कवितालाई पनि त्यति सरल त कहाँ मान्न सकिएला र < तर समकालीन नेपाली कविताले २०४६ सालसम्मको प्रतिनिधित्व गर्दा यस १५ वर्ष भित्रको नेपाली राजनैतिक जीवनलाई पनि नजिकैबाट हेरेको देखिन्छ । शान्ति क्षेत्र, युद्धको विरोध, मानवतावाद, अन्तर्राष्ट्रियतावाद, विकासको चाहना, राष्ट्रवादी सोच प्रजातन्त्रको आग्रह आदि यस कालका कविताका मूल स्वर सुनिन्छन् ।
पचासको दशक नेपाली कविताको गौरवमय दशक हो । त्यसो त यस दशकले साहित्यका सबै विधालाई नै अत्यन्तै मुक्त र स्वतन्त्र आकाश दिएको हो । कविताले त झन् खुल्ला मैदान पायो । यसै आकाशमा कावा खाँदै विचरण गरिरहने एक्लै, छुट्टै र स्वतन्त्र उडिरहेको देखिने कवि हुन् - मनु मन्जिल । राजधानी बाहिर रहेर कवितालाई एउटा कलाकारले झैं बडा मेहनतका साथ गोड्ने परिस्कार गर्ने र सुन्दर प्रस्तुतिले भावको सम्प्रेषण गर्ने कलम पाएका, 'आँधीको आवेग' नामक कृतिका स्रष्टा आजका युवा कवि हुन् - मनु मन्जिल ।
हरेक युगमा कविताले नयाँ नयाँ परिभाषाहरू टेक्दै हिँड्नुपरेको छ । कहीँ चट्टानमा कहीँ सिस्नोघारीमा, कहीँ खुल्ला राजमार्गमा जहाँ जसरी हिँड्नु परे पनि तर यसले हिँड्नु परेकै छ, उभिन पाएको छैन । पाठकहरू यसका विशिष्ट छन्, पाठकीय विशिष्टता पनि कविताको समस्या बन्दछ । पाठक जति बौद्धिक र स्वयम् कल्पनाशील हुन्छ- कविताले त्यति नै द्रुत गतिमा अघि भाग्नुपर्छ । पाठकबाट भेटिनु हुँदैन कविताले । तर आजका पाठक स्वयम् यति गतिशील छन्, झण्डै-झण्डै छुन खोजिहाल्छन् चेतनाले । कविताको स्तरीयताको सधैँ प्रश्न उठिरहन्छ । सधैं कवितामा असन्तुष्टिहरू आइरहन्छन् । बोध गर्नुपर्छ त्यसबेला पाठकीय चेतनाले कविताको संवेगलाई भेट्न खोजिरहेको छ कि -
कविता कस्ता लेख्ने वा किन लेख्ने ? कवितामा के लेख्ने र कसका लागि लेख्ने ? यी शाश्वत प्रश्नहरू हुन् । तर यिनका उत्तरले कहिल्यै पूर्णता पाएका छैनन् । जसको उत्तर हुँदैन त्यसले के पूर्णता पाउनु ? एउटा प्रश्नका अनेक उत्तरहरू उहिलेदेखि नै छन् । धेरै विकल्पहरूले सुशोभित छौं हामी । विकल्प धेरै भएकैले बाँच्न सजिलो भएको पनि हो । यिनै अनेक वैकल्पिक उत्तरहरूको सुगमताले नै हामीलाई दिनदिनै नयाँ कविता लेखिरहन मन लाग्छ, पढिरहन मन लाग्छ । केही रूढ उत्तरहरू पनि छन् , जसले भन्छन्- 'कविता खास वस्तुका लागि, खास समूहका लागि र खास उद्देश्यका लागि लेख्नुपर्छ ।' त्यसरी लेखिन्छन् पनि, त्यसरी लेखिएका कविताहरू कुनै जन्मोत्सव-अङ्क, स्मृति-अङ्क वा स्मारिकाको सजावट जस्तोमात्र भएर रहन्छन् । त्यस्ता कवितामा गति हुँदैन । ती चेप्टा हुन्छन्, गुड्दैनन् । त्यहीँको त्यहीँ बसिरहन्छन् । सदा कालका लागि लेखिएको महान् भ्रममा तत्कालै मरिरहेका हुन्छन्, कैयौं यस्ता कविताहरू ।
"अर्थ" नै कविता हो ? गहिरिएर हेरे प्रष्ट हुन्छ - अर्थ कविता होइन । ती अर्थहरूले जन्माउन सकेका भावहरू, कल्पनाहरू, सङ्केतहरू कविता हुन् । कवितामा कविता जन्माउने सघन अर्थ छ ।' (इ.ब.राई – सन्दर्भमा इश्वर बल्लभको कविता)
मन्जिलको तुलना कसैसँग गरिरहन पर्दैन । उनकै कविता पनि कतिपय उनका आफ्नै कविताहरूसँग अतुलनीय छन् । गहिरो अध्ययन, गम्भीर चिन्तन र विषयप्रतिको मोहनीय अनुरागले कवि मनु एउटा छुट्टै चिनिने प्रतिभा हुन् । प्रकृतिले उनलाई दिएको गला र शरीर पनि एउटा व्यक्तित्ववान् कविको लागि सुहाउँदो छ । मनु मन्जिल मञ्चमा पुगेपछि सारा श्रोताहरू चुपचाप हुन्छन् र मनुमात्र एक्लै कवितापाठ गरिरहन्छन् । गहिरो कुवाबाट निस्किएर आएको कुनै तापसीको गूढ रहस्य बोकेको जस्तो ध्वनिले वातावरणलाई च्याप्पै समातेको हुन्छ र कविता ..... । ती त त्यसै पनि चम्किलो चेतनाका ज्योतिजस्ता लाग्छन् । सुन्दै गयो कहाँकहाँबाट आइरहेको देववाणीजस्तो कानमा र मनमा ठोकिन्छन्, सूक्तिमय भएर कविताका पङ्क्तिहरू ।
साह्रै आह्रिस लागेर आयो मलाई मनुका कविताहरूको । निकै मन परेको वस्तु जे पनि आफ्नै होस्, आफ्नै पारूँ जस्तो लोभ जसलाई पनि लाग्छ । मन परेको वस्तु अर्काको नहोस् । खुसी, रमाइलो र प्रशंसाहरू आफूसँगै मात्र रहून् जस्तो लागिरहन्छ मलाई सधैँ । मनुका कविताले त्यस्तै पार्‍यो । जुन हेर्‍यो- 'यो त मैले लेख्नसकेको भए ..... ।' जस्तो लागि हाल्ने । धेरै राम्रो र मनपर्दो वस्तु बढ्तै आफ्नो पार्न खोज्दा नष्ट पनि गरिन्छ नि हगि ! मलाई कुनैकुनै कविता त च्यातिनै दिऊँ जस्तो पनि लाग्यो - किन त्यति राम्रा, मीठा त ती ।
मनुका कवितालाई कहाँबाट चर्चा प्रारम्भ गर्ने ? उनका कविताको विषय, स्वर, सनदर्भ यति सशक्त र सुस्पष्ट छन्, ती प्रत्येक पाठकलाई पारदर्शी संगीत हुन्छन् । उनका कविता बुझन सहयोगीको आवश्यकता पर्दैन तर बुझिसकेपछि बुझन पो फेरि अर्कोपल्ट नदोहोर्‍याई हुँदैहुँदैन । यो बुझिसकेर फेरि बुझनुपर्ने, बोधभित्रको दुर्बोध्य परतचाहिं मनुले कसरी बुनेहोलान् ? मलाई अचम्म लाग्यो । यसै त मनुका कवितामा, भूपी, कृष्णभूषण वल, विष्णुविभु, कालीप्रसादका जस्तै सजिला विम्ब, प्रतीक र वाक्य संरचनाहरू छन् तर मीठो दुख्नेगरी च्याप्प मुटु समात्ने उनको बानी पो खराब । कविता पढ्दापढ्दै खै कहाँ त्यो गाँठो पर्छ - आफैं हुरुक्क ।
उनका कवितालाई प्रशंसाको यति लामो पुल नै किन हालिरहनुपर्ला र ! ती आफैं उठेर जुरुक्क - जुरुक्क कुद्न थालिहाल्छन्, संवेदनशील पाठकीय भावनाको मैदानमा । उछिनपाछिन गर्दै आउने पाठक मनलाई पनि एकछिन छेउमै चुपचाप उभिन बाध्य गर्राई जिम्नाष्टिक गर्छन् मनुका कविता । धेरै लामो अवधिपछि कवितामा यो सन्तुष्टि प्राप्त गरें मैले ।
कवितालाई विचारको भारी, सिद्धान्तको नोकर, आदर्शको हली बनाएर हिंडाउने परम्पराले दिक्क भएको यो पाठकमन कुनै कविता यसो शीर्षक र केही वाक्य पढ्दै थन्क्याउने भइसकेको थियो । छिचोल्नै मन नलाग्ने वाक्यहरूले पोतिएका चट्ट मिलाई बाइन्डिङ गरिएका आकर्षक चित्र खोलसहितका कागजको प्याकेट हातमा परिरहन्थे । हेर्दै थन्क्याउँदै । कविता मानिएकाहरूमा कुरा हुन्थे, कुरा भन्दा धेरै नारा हुन्थे, नाराभन्दा धेरै' प्यारा' हुन्थे । साँच्चै भनेको यो पचासको दशकले यति धेरै कविता लेख्यो कि वास्तवमा कवितै लेखेन कागजमा अक्षरहरू लेख्यो, वाक्यहरू लेख्यो ।
मनुका कविताले हिँडेको बाटो पनि प्रतीक र विम्बकै राजमार्ग हो तर नयाँ नयाँ विम्ब प्रतीकहरूको सिर्जना गरी यी कविता चेतनामा मार्तोलझैं 'ठङ-ठङ' ठोक्किन आइरहन्छन् । परम्परागत विम्बहरू झन्डै बहिस्कृत छन् यहाँ । आजको सन्दर्भमा आजकै नव प्रतीकहरू पाठकलाई झस्काउन र छ्याङ्ग पार्न उभिन्छन् अगाडि ।
आख्यानले उभिएका यी कविताहरू कतिकति बेला आफ्नै प्यारी बहिनीजस्ता लाग्छन्, जसलाई माया गरेर हेरिरहूँ, छेउमा बसाऊँ र सोधूँ- "बहिनी कस्तो छ ? खुसी नै छौ त ?"
तर कविताहरू कुनै ठाउँमा दुःख पाएर, गलाभरि अवरुद्धता र आँखाभरि आँसु बोकेर माइत आएकी बहिनीजस्ता छन्, कुनै बेला रोइ पनि हाल्छन् कुनै बेला मनमा एकथोक भए पनि मुखले अर्थोक नै भनी ढाँट्न खोजिरहेका हुन्छन् । कुनैकुनै कविता-बहिनीले मज्जाले रुन आमा खोजिरहेजस्ता पनि छन् । केही ठाउँमा निक्कै रिसाएकी र अब त्यस घरमा मर्दा पनि फर्किएर जान्न भन्न खोजेकी जस्ता पनि छन् । जे होस् कविता पढ्दै जाँदा प्रत्येक कविताले भित्र कहाँ कहाँ भावुक, संवेदनशील, विद्रोही के - के, के- के बनाइरहन्छ ।
नारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राष्ट्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण, युग र समयको मूल्याङ्कन, प्रजातन्त्रप्रतिको सचेतना यी कविताका आधार भूमिहरू हुन् । झन् मज्जाले नै दिल खोलेर कुरा गर्ने हो भने - मनुका कविता प्रजातन्त्रका लागि मर्न तयार सहीदीय आकाङ्क्षाले प्रेरित पनि हुन् । उनले समसामयिक विकृति र विडम्बनामा अल्झेर, अलमलिएर प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाइरहने आजको कराँसे बौद्धिकहरूको सोचलाई आफूछेऊ आउन दिएका छैनन्, स्पष्ट छन् उनी आफूसँग र समय चेतसँग । इतिहासका हरेक उचाइ र गहिराइलाई चिनेका तिनले समसामयिक संवेग नै युगान्तकारी निर्णय होइन भन्ने बुझेका रहेछन् । त्यसैले उनका कविता आत्तिएका पनि छैनन्, हतारिएका पनि छैनन्, निराश पनि छैनन् । एउटा धैर्यशील र दूरदर्शी तापसीझैं शान्त र त्रिकालीय दृष्टि चेतले उभिएका लाग्छन् यी कविता ।.....
.....पत्नी, छोराछोरी, आमाबाबु, समाज सबै छन् कवितामा । पत्नीको घरभित्रको जीवनलाई मिहिनपाराले हेरिएको कविता 'उनी कविता जीवनको रङ्गले लेख्छिन्'ले प्रत्येक पाठकलाई आफ्नी पत्नीप्रति सोच्न र तिनको जीवनलाई हेर्न बाध्य गराउँछन् आज तिनै पत्नी रिसाउँदा- 'घरको आँधी' कस्तो हुन्छले छर्लङ्ग पार्छ । तिनले केही नबोली सुरुसुरु काम गरिरहँदाको घर र तिनले चित्त दुखाई रिसाउँदाको घरभित्रको चित्रण प्रत्येक परिवारको जीवन्त कथा हुन्छ । सरदर समयमा उनी -
ला ..... । उनी रिसाएको यस्तो बेला अब कतिञ्जेल रहला ? घर अब के होला ? मन त्यसै डराइरहेकोमा -
ए ..... । तर त्यो आँधी एकैछिनको हुँदो रहेछ । विस्तारै उनी फेरि जीवनको रङ्गले कविता लेख्न थाल्दिरहिछन् । घरभित्रको जीवनलाई कविले यी दुइवटा कविताबाट दुइ अवस्थाको चित्रण गरेका छन् । घरभित्र पत्नीको महत्व, हैसियत र स्थानको सुन्दर मीमांसा भएको छ यहाँ । तिनको सामान्यताको जीवन जो घरको प्राण हो, तिनको असन्तुष्टि र विद्रोह घरको एउटा भयङ्कर आँधी । आमाहरूको महत्वलाई हेरिएको यस कविताले नारीको जीवन पुरुषसँग कसरी अविभाज्य रहेछ चिनाउन खोज्दछ ।
पत्नीबाट केटाकेटीतिर सर्छन् उनी -
म के गरुँ -
बालकहरूको चकचके जीवनलाई सरल र मिहिन पाराले हेरेका तिनले तर यो केटाकेटीपनलाई राष्ट्रको बेथितिसँग पनि जोडी व्यङ्ग्य गरेका छन् -
अलिक गम्भीर भैदिएकै सुहाउँथ्यो कि -
पुर्खाले कमाएर छोडिदिएको पैतृक सम्पत्तिले परितृप्त भई बसिरहेको अल्छी सन्तानका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय जीवनलाई देखेका छन् कविले । यथार्थमा अवस्था यस्तै छ आजको हाम्रो । हामीलाई पुर्खाले छँदै नभएको देश बनाइदिएका थिए तर त्यसलाई सिङ्गारपेटार समेत गर्न नसकी त्यत्तिकै बसिरहेका हामीलाई कवि भन्छन् -
प्रत्येक रात कर्फ्यू भोगिरहन बाध्य भएको हाम्रो जीवन कुनै रात कर्फ्यू नलाग्दा कति खुसी हुन थालेको छ । देश आफ्नो भएर पनि अब नागरिकहरू देशका हुनसकेका छैनन् । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान प्रतिबन्ध छ । आतङ्कको अज्ञात भयले मानिसहरू आफ्नै घरभित्र स्वकैद जीवन भोगिरहेको आजको वर्तमानलाई भन्न यत्ति तीन हरफ अभिव्यक्तिनै पूर्ण देखिन्छ । त्यसमा अर्को कविताले थप्छ केही कुरा यसरी -
यी दुइ कविताले भिन्दाभिन्दै पृष्ठबाट एउटै कुरा भन्दै छन् अलगअलग शीर्षकमा कर्फ्यू आदेश जारी नहुनुमा जुलुस निक्लने सम्भावना नहुनुरहेछ । प्रत्येक जुलुस कर्फ्यूको उत्पादक बन्दो रहेछ अचेल । अचेल यहाँ स्वतन्त्रताको र मानवीय मूल्यको अनायासै ह्रास भएको बेला हो । उनी वर्तमान नेपाली राजनैतिक जीवनमाथि व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै भन्छन् -
- धरतीमा साँझ ओर्लेको समय
अर्थात्, प्रजातन्त्रका सबै अधिकारहरू निलम्वित जस्तो भएको भावनात्मक रूपमा अन्धकारबोध हुने यो समय तर कसैलाई त सबैभन्दा शालीन र सुन्दर नै लागेको छ । त्यसैमा प्रफुल्ल र सन्तुष्ट पनि छन् । तानाशाहीभित्र पनि प्रजातन्त्र हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गरेपछि । तानाशाहीलाई स्वीकार गर्नेहरूलाई कहाँ छ जेल, नेल र हत्कडी, कहाँ छ रोकटोक, कहाँ छ स्थानहद - संसारमै प्रजातन्त्र भनेको आफ्नो तन्त्रप्रतिको समर्थकलाई उपलब्ध हुने अधिकार त हो नि ।
नकारात्मक सोच नभएका, अनियन्त्रित विद्रोह नबोकेका, हीनता, पलायनता र निराशा वर्जित रहेका, जीवनसँग ज्यादै घनिष्ठ सम्बन्ध राख्ने यी कविता जति पढ्यो त्यति मीठो र रमाइलो हुन्छ यहाँ । विषयलाई हेर्ने मनुको कोल्टे आँखै रमाइलो । 'दुस्मन' शीर्षकको कवितामा उनले देखेको दुस्मन कति प्यारोप्यारो -
आयो तीज बरिलै
नसोध मेरो हाल